ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏အတွေ့အကြုံ - ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
J ကိုကလေးသူငယ်လိင်အလွဲသုံးမှု။ 2016 ဇန်နဝါရီ 30: 1-17 ။
Gerhard-Burnham B ကို1, Underwood LA က2, အစက်အပြောက် K သည်3, ဝီလျံကို C2, Merino ကို C2, Crump Y ကို4.
ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ဆိုင်ရာအရအပြုအမူအပြောင်းအလဲများကိုကုသမှုသည်ဤဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသော ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုအပြုအမူအတွက်ကုသမှုအစီအစဉ်အများစုတွင်သိမြင်မှုဆိုင်ရာပုံပျက်မှုများ / စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအမှားများပါဝင်သည့်ပရိုဂရမ်အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်လုံခြုံစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုမှဆုံးဖြတ်အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်လေးယောက်နှင့်အတူအယူအဆရေးရာမြေပုံလေ့ကျင့်ခန်းအပါအဝင်အင်တာဗျူးများခဲ့ကြသည်။ ယောက်ျားလေးယောက်စလုံးသည်အင်တာဗျူးတစ်ခုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယောင်ဆောင်သောအပြုအမူများနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး အနေဖြင့်သူတို့၏ရိပ်မိသည့်အတွေ့အကြုံများ၏အယူအဆဆိုင်ရာမြေပုံကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ အားလုံးအင်တာဗျူးအသံမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနှင့်အယူအဆရေးရာမြေပုံရေးဆွဲခြင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ယောက်ျားလေးများ၏အတွေ့အကြုံတွင်အဓိကအကြောင်းအရာငါးခုကိုရရှိစေခဲ့ပြီးသိမြင်မှုဆိုင်ရာပုံပျက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဖော်ထုတ်ရာ၌အစောပိုင်းစိတ်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သောအခန်းကဏ္aကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မိသားစုအချက်များပံ့ပိုးကိုလည်းသိမြင်ပုံပျက်တည်တံ့ခိုင်မြဲအတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစား။ အဓိကအကြောင်းအရာများပါဝင်သည်: တာဝန်ရှိဖခင်သို့မဟုတ်ဖခင်ကိန်းဂဏန်း၏ဆုံးရှုံးမှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းညှိဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်မိဘ၏နယ်နိမိတ်မရှိခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစောစောထိတွေ့မှု။
တာဝန်ရှိအထီးဖခင်ကိန်းဂဏန်းများ၏ပံ့ပိုးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမူလကယူဆထက်ငယ်ရွယ်ယောက်ျား၏ဘဝအသက်တာ၌တစ်ပင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။ ဘယ်လိုဆယ်ကျော်သက်တိသူ့ကိုယ်သူပြောထားသည်အဘယ်အရာသည်သူ၏ပတ်ဝန်းကျင်-in ကိုအနှစ်သာရရိပ် မိ. နှင့်သူ၏၏အဓိပ္ပာယ်စေရန်မိမိကိုမိမိပြောပြရန်ဆက်လက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့အပြုအမူကျူးလွန်ခြင်းနှင့်တရားမျှတရန်အသုံးပြုအမှားအယွင်းများ / သိမြင်မှုပျက်ယွင်းစဉ်းစား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်လက်အတွက်လုပ်ကွက်တည်ဆောက်ခြင်းကမ္ဘာ့နေကြသည်။
ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ; သိမြင်မှုပျက်ယွင်း; ဖခင်ကိန်းဂဏန်း; မိဘအုပ်ထိန်း; ဒဏ်ရာ